Ihe nkwụnye ọkụ na mpụga Jdị J - Ngwongwo mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
Ydị Jdị J
A na-eji Jdị J eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na Switzerland na Liechtenstein. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị J)
Switzerland nwere ọkọlọtọ nke ya nke akọwara na SEC 1011. Nkwunye a yiri ya C, ewezuga na o nwere mgbakwunye nke ntụtụ. Jdị J nwere pọọlụ atọ nwere mmiri anọ, na-atụ 4 mm n'ogologo. Ogige ahịrị ahịrị na otu ahịrị na-anọpụ iche nwere oghere 19 mm ma ha nwere akwa mkpuchi ogologo 19mm. Versionsdị nke ochie nke plọg a nwere pikọp na-enweghị uwe. Jdị J yiri nnọọ onye Brazil ụdị N ọkọlọtọ, mana ya ekwekọghị na ya ebe ọ bụ na ụdị J nwere ụwa pin karịa n'etiti eriri etiti karịa ụdị N: etiti etiti ka etiti etiti etiti ụwa na etiti etiti ahịrị na-ejikọ atụtụ abụọ ahụ bụ 5 mm. Ekwenyela usoro njikọ a maka iji ya na ngwa ruru 10 amps. Karịrị 10 A, akụrụngwa ga-adịrịrị ikuku ma jikọtara sistemụ eletriki nwere nchedo nke ngalaba ma ọ bụ jikọtara ya na nkwonkwo ụlọ ọrụ nwere ike dị elu. A ụdị C plọg dabara nke ọma na ụdị J anya.